Momba anay - Huizhou WeiHua Technology Co., Ltd.
Ny efitrano mirefy 40 000 metatra toradroa dia manana fahaiza-manao hihaona amin'ny aliminioma extrusion rehetra anao, takelaka logo, filan'ny fitomboana azo antoka miaraka amin'ny safidy fanamboarana marobe hamokarana vahaolana avo lenta.
Latabatra voalohany-gorodona voalohany
efitrano fatoriana iombonana
Miasa amin'ny taona 2017 ao an-tanànan'i Huizhou, Huizhou Weihua Technology Co., Ltd. dia avy amin'ny Shenzhen Weihua Nameplate Manufacturing Co., Ltd. izay natsangana tamin'ny taona 1996. Ankehitriny dia toa marika iray lehibe eo amin'ny indostrian'ny fikirakirana anatiny. Nandritra ny ezaka nandritra ny taona maro sy ny sokitra, nivadika orinasa lehibe sy feno ary teknolojia avo lenta izy io miaraka amina mpiasa efa ho 500, ao anatin'izany ny R&D, ny famolavolana, ny famokarana, ny asa aman-draharaha sy ny fivarotana ary ny fampidirana ny teknolojia mandroso sy ny filozofia momba ny fitantanana.
Miorina amin'ny "Ny kalitao aloha, ary ny mpanjifa mifantoka" ho fitsipiky ny serivisinay, dia nanandrana ny ezaka faran'izay tsara izahay mba hanolorana ny mpanjifanay amin'ny vokatra ambony sy vahaolana famoronana vokatra.
Inona no fanompoana anay?
Eto ambany eto no misy ireo sokajy vokatra sy fitsaboana lehibe ataonay:
1. Fitaovana mazava ho azy: - ampahany kely amin'ny telefaona finday, faritra voapetraka, faritra vita amin'ny milina CNC, faritra vita amin'ny oksizenina, faritra misy tombo-kase, faritra voasokitra.,
2. Nameplate: faritra vita pirinty, faritra misy hajia, takelaka PC / PET, fametahana alim-bolo avo lenta, takelaka electroforming, varahina na badge st / st, takelaka epoxy, takelaka alum, mari-pamantarana maty-cast, takelaka akrilika, faritra elektroforming ary voasokitra faritra sns
3. Fizarana extrusion alum: - faritra misy tranga (fampiasa telefaona finday, fantsom-piampangana, sigara elektronika), heatsink, sns.
4. Sombin-kazo hosoka: Sombin-kazo sandoka Alum, st / sandoka st.
5. Fantson'ny sary hosodoko: UV, PU, ​​firakotra maromaro + sanding, hosodoko amin'ny seramika, sary sokitra laser 3D, varahina matt, PVD mihoatra ny metaly, fitaratra, seramika vita amin'ny hosodoko, fanaovana sary mihetsika sns.
6. Fitsaboana ambonin'ny tany: Sandblasting, anodizing, sary hosodoko, pirinty vita amin'ny silkscreen, ketrona CD, fandavahana sy sary sokitra, satin, ketrona ary sokitra laser sns.
Ny fitrandrahana aliminioma matevina indrindra dia novokarina tamin'ny alàlan'ny teknikan'ny fananana izay manome endri-javatra, fandeferana ary famaranana ambonin'ny tany izay nino fa tsy ho vita mihitsy. Ity fizotran'ny extrusion tsy manam-paharoa ity dia manohy manaitra ireo injenieran'ny famolavolana, manome safidy endrika hafa ho an'ny famokarana singa vita amin'ny aliminioma.
Ny solosaina vy anay dia ampiharina amin'ny indostria sy orinasa marobe, ny faharetana no ahiahin'ireo mpanjifanay voalohany, noho izany dia mamokatra tsara ireo solosaina vy izahay miaraka amina vy vita amin'ny vy maharitra, alao antoka fa ny solontenanay amin'ny kalitao avo sy matanjaka ary azo ampiasaina tsy tapaka.
Fanitsakitsahana metaly manokana
WEIHUA dia nanangana laza amam-pamokarana sarotra, avoaka vita amin'ny vy manokana miaraka amin'ny fahombiazana sy kalitao avo indrindra. Ny tranokala WEIHUA dia mampiasa ny haitao mandroso indrindra amin'ny famolavolana, famokarana, fanaraha-maso, fonosana ary fandefasana - hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny indostria maro karazana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Lahatsary an'ny orinasa
Raha liana ny hifandray amin'ny rep varotra izahay dia kitiho eto
Mifandraisa varotra iray
Vokatra mafana - Sitemap nohitsakitsahana ny kaontinanta, fametrahana haingony inc, machining mazava tsara, cnc machining ampahany,